Waraabinta | February 2020
Faa'iidooyinka isticmaalka waraabka faleebo ee dacha
Waxaa jira dhowr sababood oo ah beeralayadu aysan rabin ama aysan awoodin inay iibsadaan nidaamyada waraabka oo diyaar ah oo loogu talagalay beeraha khudradda iyo kuwa lagu koriyo. Xaaladaha noocaas ah, waraabka faleebada waxaa lagu sameeyaa gacanta laga bilaabo macnaha degaanka xagaaga. Ka dib oo dhan, goobtaada waxaad ka heli kartaa alaab iyo qaybo ku filan tan.
Pump for waraabinta foornada: sida loo doorto iyo sida loo abaabulo waraabinta
Mishiinka foosto loogu talagalay waraabinta waa qalabka ugu muhiimsan ee haqab-beelka ah ee waddanka dacha, halkaasoo aan laga helin biyaha laga helo kanaalka biyaha qaada. Haddii santuuqa sariiraha iyo sariiraha ubaxu ay sidoo kale kugu haboon yihiin, hoosta waxaad baran doontaa wax walba oo ku saabsan sida loo doorto bambooyin loogu talagalay beerta beerta foostada.
Doorashada rusheeyaha loogu talagalay waraabinta beerta
Goob kasta oo dacha ah oo ay ka mid yihiin miraha, khudaarta iyo dhirta kale waxay u baahan yihiin waraabka. Maqaalkeena waxaan ku sharaxi doonnaa sida loo doorto rusheeyayaasha loogu talagalay waraabinta beerta, waxaan ku tilmaami doonaa noocyada ugu waaweyn ee qalabkan. Faahfaahinta guud iyo ujeedada qalabka Iyadoo ku xiran waraabinta goobta iyo dhirta waa in la sameeyaa, waxaa muhiim ah in la doorto rusheeyaha midig.
Ka waraabinta beerta leh nidaamka waraabinta "Drop"
Si aad u hesho goosashada qani ku ah, iyada oo aanad samayn goobta 24 saacadood maalintii, waraabinta dhirta, nidaamyada biyaha ee gaarka ah ayaa loo abuuray beerta. Dhexdhexaadinta aadka loo jecel yahay waa naqshadeynta naqshadda Maqaalkeena, adigoo isticmaalaya tusaalaha "Dhaafka", waxaanu ku sharxi doonaa waxa dhismahaasi yahay iyo sababta ay muhiimka u tahay.
Faa'iidooyinka isticmaalka saacad loogu talagalay waraabinta beerta
Milkiilayaal badan ayaa waqti badan ku qaataan waraabinta dhirta, iyada oo qarash badan ka badan dhirta loo baahan yahay. Gaar ahaan dhibaatooyin ah in la soo saaro waraabin joogto ah oo ka fog goobaha guryaha iyo beeraha. Ujeeddooyinkaas oo kale ayaa la abuuray wakhti go'an oo biyo waraabin ah, oo aan ka wada hadli doonno maqaalkan.
Sida loo sameeyo calaamadda tuubada biyaha dejiya adiga ayaa sameeya
Marka la yimaado maalmaha guga diiran, bannaanka u bilaabaan xilli firfircoon ee beerto iyo waraabinta, iyo sidoo kale diyaarinta iyo hubinta dhammaan qalabka lagama maarmaanka ah. Wixii bannaanka u ah qaar ka mid ah, dib u xusuusta kaliya ee ay adagtahay in la jeexo tuubada biyaha ayaa keenta argagax. Si loo xaliyo dhibaatadani waxay gacan ka geysaneysaa qalabka loo isticmaalo tuubada waraabka.